Ihe Nnamdi Kanụ na-eme iji tọhapụ ndi Biafra nke ikpeazụ | odumblog
posted on Jun. 05, 2019 at 10:27 am
Ndi ‘Indegenous People of Biafra (IPOB) n’ụbọchị Tuzdee ekwuputala na onyeisi ha bụ Nnamdi Kanụ na ndi otu ya nọ na mba ofesi na-achịkọta onwe n’ike maka ntọhapụ ikpeazụ nke Biafra. IPOB kwuru na nchịkọta na-aga n’ihu n’obodo dị iche iche dị n’ Amerika, Canada na ‘London’.
Otu a ka onye na-ekwuchitere ha ọnụ bụ Emma Powerful kwuru:
‘Ije mba ofesi a bụ ịchịkọta ndi Biafra ọnụ maka ntọhapụ ndi Biafra nke ikpeazu n’aka Naijiria. Ije a nke Nnamdi Kanụ na-eme esiela ike n’ụwa niile ọkachasị na nleta nke ọ gara na ‘United States of America’. Nleta ọ gara n’America bụ maka ịchịkọta ndi Biafra niile bi na America nakwa obodo ndi ọzọ nọ n’ụwa maka ịgbaso otu ebumuche n’okpuru otu echiche dika IPOB gosipụtara’.
O gara n’ihu kwuo: ‘Ndi Biafra nọ n’akụkụ America dị iche iche gunyere Ijaw, Igala, Idoma, Ogoni, Igbo, Efik, Urhobo, na ndi ọzọ. ha bịakotara ọnụ ma were otu olu na-achọ ụzọ a ga-esi nweta ntọhapụ nke Biafra’.
Emma kwuru na n’izu gara aga, ndi Biafra nọ n’America nabatara onyeisi Nnamdi Kanu na nwunye ya bụ Oriakụ Uchechi Okwu Kanu na ndi ya na ha so ga na Atlantic Georgia, n’ubọchị nke iri atọ n’ ọnwa May, 2019. Ọ sịrị na ndi Biafra ndi ọzọ na-akwadokwa inabata ya n’otu ha di iche iche.
Emma makwara ndi ekwetaghi bi na Canada na America aka ka ha pụta chee onyeisi ihu gbasara nsogbu ha nwere n’ebe Biafra nọ. O kwuru na Nnamdi Kanu di njikere ịza onye ọ bụla ajụjụ ya na-agbanyeghi ebe onye si.
O sikwara na ndi nọ n’ala Naijiria na-anwa ike ha ịhụ na atọhapụrụ Baifra. O kelere Chukwu Okike Abiama, riokwa ya ka gozie ma Chekwaba ndi na-agba mbo ịhụ na ntọhapụ Biafra bụ ihe bịara na mmezu.
Ọhaneze akpọọla Buhari ka ọ rituo maka nzukọ ndi OIC ọ gara
Odum Blog15 hours ago